आर्थिक अपराधीलाई डालासमा सहयोग-Brtnepal.com
Loading... आर्थिक अपराधीलाई डालासमा सहयोग
लेखनाथ गौतम Published on September 25, 2016 at 10:06 pm
अहिले नेपाली समाजमा सबै जना नेपालका कुरा गर्नु हुन्छ, नेपालको सम्वृद्धिको कुरा गर्नुहुन्छ। नेपालमा सुशासनको कुरा गर्नु हुन्छ। प्रबाशमा रहेर पनि नेपाल प्रति अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्छ। तर यहि समाजमा नेपालबाट आर्थिक अपराध गरेर अमेरिका पसेका व्यक्तिको पक्षपोशण गर्नुहुन्छ। नेपालमा भ्रस्टाचारिलाइ झुन्ड्याउनु पर्छ भन्नु हुन्छ तर इन्टरपोलले वारेण्ट जारी गरेको आर्थिक अपराधीलाई मज्जाले सहयोग गर्नु हुन्छ, पैसाको लोभमा उसलाई चोख्याउने प्रयास गर्नुहुन्छ। व्यक्तिगत रुपमा जसको जो संग सम्बन्ध भए पनि संस्थागत रुपमा त्यस्ता तत्वहरुलाई बल पुर्याउने काम गर्नु पक्कै उचित हुँदैन।
यो सप्ताहन्तका केहि अनुभवहरु :
सदा झैँ यो सप्ताहन्त पनि ब्यस्त भैयो। हिजो शनिबार योग गुरु ललित शंकर योगीको बिदाइ कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर मिल्यो। जिन्दगीमा असल व्यक्तिसंग भेट हुनु पनि भाग्यको कुरा हो। उनिहरुसंग संगत गर्नु र उनीहरुका कुरा सुनेर आफुलाई धन्य बनाउन पाउनु झन् ठुलो कुरा हो। मेरो लागि त्यो अवसर जिन्दगीका धेरै कम महत्वपूर्ण क्षणहरु मध्ये एक रह्यो। जिन्दगि बदल्न सक्ने मृदु बचन र स्वास्थ्य बदल्ने योगद्वारा उहाँले हामीलाई धन्य बनाउनु भयो। डालस नेपाली समाजको लागि उहाँको उपस्थिति एउटा उपहार थियो। त्यो उपहार हामीले कति प्रयोग गर्न सक्यौं अर्को कुरा हो। तर त्यो अवसर गुमाउनु भनेको जिन्दगीको ठुलो अवसर गुमाउनु हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो लगभग एकमहिना गुरु ललित शंकर योगीले थुप्रै स्थलहरुमा बिनाशर्त र बिना कसरत हाम्रो जिन्दगि बदल्ने कार्यक्रम गर्नु भयो। यसको लागि हामी र हाम्रो डालस समाज उहाँ प्रति कृतज्ञ छ।
नेपालमा सुशासनको कुरा गर्नु हुन्छ। प्रबाशमा रहेर पनि नेपाल प्रति अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्छ। तर यहि समाजमा नेपालबाट आर्थिक अपराध गरेर अमेरिका पसेका व्यक्तिको पक्षपोशण गर्नुहुन्छ। नेपालमा भ्रस्टाचारिलाइ झुन्ड्याउनु पर्छ भन्नु हुन्छ तर इन्टरपोलले वारेण्ट जारी गरेको आर्थिक अपराधीलाई मज्जाले सहयोग गर्नु हुन्छ, पैसाको लोभमा उसलाई चोख्याउने प्रयास गर्नुहुन्छ।
अर्को कार्यक्रम शान्तिको लागि विकास भन्ने संस्थाको अन्तरक्रिया रह्यो। २००७ मा अमेरिकाको टेक्सास राज्य स्थित हर्स्ट सिटीमा स्थापना गरिएको यो परोपकारी संस्थाले नेपालमा धेरै काम गरिसकेको रहेछ। खासगरी शिक्षा र महिला शशक्तिकरणको क्षेत्रमा आफ्ना सिमित साधन र श्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै गरिएका कामहरु हेर्ने र सुन्ने अवसर मिल्यो। दुइछाक भात खान मात्र हामी जन्मेका होइनौ, हामीले अरुको लागि बाँच्नु पर्छ भन्ने उद्देस्य बोकेको यो संस्था र संस्थाका पदाधिकारीहरुको महान उद्देस्य देखेर सबै जना प्रभावित बने। नेपालमा समाज सेवा गर्ने भनेर अमेरिकामा खोलिएका संस्थाहरुमा प्रायश नेपालीहरु मात्र हुने प्रचलनलाइ परिबर्तन गर्दै अमेरिकी नागरिकहरुलाई पनि यसमा सहभागी गराइएको छ। त्यस्तै एउटा काम गर्दा तीन बित्ता उफ्रेर प्रचारमा उत्रिने भन्दा लो प्रोफाइलमा बसेर नेपालका गाउँहरुमा बास्तविक परिबर्तन ल्याउन यो संस्थाले भूमिका खेलेको रहेछ। यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाउँदा पनि म धन्य बनें। संस्थाका सम्पूर्ण समाजसेवीहरुलाई धन्यबाद।
आज आइतबार फेरी अर्को भब्य कार्यक्रममा जाने अवसर मिल्यो। इन्द्रजात्रा। धेरै अघि काठमाडौँ उपत्यकामा शुरु भएको इन्द्रजात्रा अमेरिकामा देख्न पाउनु सौभाग्यको कुरा हो। हाम्रो देश धेरै संस्कृतिको धनि छ। त्यसमध्ये नेवार संस्कृति एक हो। नेवारी संस्कृति र नेवारी खाना नेपालमा अत्यन्त लोकप्रिय छन्। त्यसलाई अमेरिकामा भित्र्याउने काम युनाइटेड नेवा युएसए ले गरेको छ। पोहोर सालदेखि त डालस मै इन्द्रजात्रा लगायत नेपाल सम्बत जस्ता नेवारी संस्कृति झल्किने कार्यक्रम युनाइटेड नेवाले गर्दै आएको छ। नेवारी पोशाकमा सजिएका नेवारी महिला र बालबालिकाहरु हेरिरहुँ जस्ता देखिन्छन। लाखे नाच नेवारी संस्कृतिको अर्को आकर्षण हो। त्यसको पनि आज दर्शन गर्ने अवसर मिल्यो। त्यसको लागि आयोजकलाई धेरै धन्यबाद। जुनसुकै धर्म वा संस्कृति भए पनि नेपालसंग नाता जोडिने सबै संस्कृतिको जगेर्ना गर्न हामी कन्जुस्यांइ गर्नु हुन्न।
मन नपरेको कुरा :
केहि समय देखि डालस नेपाली समाजका राम्रै हैसियतका व्यक्तिहरु त्यस्ता प्रवृतिका व्यक्तिसंग प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको देखिनु चिन्ताको बिषय हो। उसको कारणले नेपालमा कति मान्छे मर्न बाध्य भए, कति मान्छेको घरबास उठ्यो भन्ने कुरालाइ नजरअन्दाज गर्दै उसैको वरिपरि घुम्ने काम हुँदैछ। के पैसा भए तपाईंहरुलाई हुन्छ ? के पैसा जुनसुकै तरिकाले कमाइएको भए पनि तपाईंहरुलाई चल्छ ? के हज्जारौं गरिबहरुको जिन्दगि भरिको कमाई सर्बनाश पार्दै पलायन भएको व्यक्तिलाई चोख्याएर मातृभूमिको ऋण तिर्न सकिन्छ ? कि तपाईंहरु नेपालको बारेमा चिन्ता गर्न छोड्नुस। भन्नुस, हामी यहाँ पैसा कमाउन आएको हो, हामीलाई जसरि पनि पैसा कमाउनु छ। होइन यदि नेपालको नाम मात्र लिनु छ भने नेपालमा अपराध गरेर यहाँ शरण लिएकाहरुको जुठो खाने काम बन्द गर्नुस।
मातृभूमिलाइ बलात्कार गरेर बिदेसमा लुकेर बसेको व्यक्तिबाट पैसा लिएर तपाईंहरुले कस्तो समाजसेवा गर्दै हुनुन्छ ? अब आफ्नो कित्ता क्लियर गर्नुस । कि न्यायको पक्षमा उभिनुस र अपराधीसंग आफ्नो नाता तोड्नुस कि न्यायसंग नाता तोड्नुस र अपराधिसंग गठजोड गर्नुस। समाजसेवी हुँ, नेपालको शुभचिन्तक हुँ भन्न कि छोड्नुस कि यस्ता प्रवृतिका मान्छेको संगत र त्यस्तालाई चोख्याउने काम छोड्नुस। दोहोरो चरित्र कृपया नगर्नुस। नत्र समयले तपाईंहरुलाई पनि उचित सजायँ पक्कै दिनेछ तपाईंको कसुरको लागि ।